Mareykanka oo War kasoo saaray Dilkii Hoggaamiye Ku-xigeenka Kooxda Daacish (Akhriso) – Idil News
Mareykanka oo War kasoo saaray Dilkii Hoggaamiye Ku-xigeenka Kooxda Daacish (Akhriso)
BOOSAASO (IDIL NEWS)-War-saxaafadeed kasoo baxay Taliska Ciidanka Mareykanka ee Qaarada Africa ee AFRICOM, ayaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday meel ku dhow tuulada Xiriiro ee Gobolka Bari lagu dilay Abdihakim Mohamed Ibraahim oo loo yaqaanay Dhoqob, kaasoo ahaa Hoggaamiye kuxigeenka Daacish.
AFRICOM ayaa sheegtay in Ibraahim uu mas’uul ka ahaa howlgalada maalinlaha ah iyo qorsheynta weerarada ay geysato Kooxda Xagjirka ah ee Daacish.
Abdihakim Dhoqob ayaa ahaa gacanta midig ee Sheekh C/qaadir Muumin, waxaa uu ka soo muuqday muuqaalo kooxda baahisay, isagoo ku sugan buuraleyda Gobolka Bari.
Wasiirka Amniga Dowladda Puntland Abdisamad Mogamed Gallan ayaa sheegay in Abdihakim Dhoqob iyo nin la saarnaa gaariga lagu duqeyn duqeyn diyaaradeed, inkastoo aan la aqoonsan qofka la saarnaa gaariga.
Kooxda Daacish ee Soomaaliya ayaa waxaa hoggaamiye ka ah Sheekh C/qaadir Muumin oo horay uga soo goostay Al-Shabaab, waxaana uu bishii October sanadkii 2015 uu la galay bayco Hoggaamiyaha Daacish Abuubakar Al-Baqdaadi.